Photo Archives - Nalapani
कुलमान भाषण गरेर सबैको प्रिय भएका हैनन्: घामपानी, भोकनिद्रा नभनी खट्ने राष्ट्र सेवक हुन
राष्ट्रियसभा बैठक : सरकार र सिके राउतका बीच भएको ११ बूँदे सहमतिको स्वागत
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिनै बम पड्किएपछि प्रहरी नै चकित
७८ लाख घुसकाण्डमा मुछिए उपराष्ट्रपतिपुत्र दिपेश !
सरकारी जागिर खाने हो ? नेपाल प्रहरीमा १ हजार ५५६ जनालाई जागिर खुल्यो (सूचना सहित)
दिल निशानी मगर कुलमान घिसिङ भाषण गरेर सबैको प्रिय मान्छे भएका हैनन्। दिनरात, घामपानी, भोकनिद्रा, चाडपर्व केही नभनी खेटेर काम गरेर प्राक्टिकल्ली हामी लोडसेडिङमुक्त हुन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर जनताको मुटुमा ढड्किरहेका असल राष्ट्र सेवक हुन्। अँध्यारो युगलाई उज्यालो युगमा बदल्ने एउटा आशाको दियोलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर निभाउने जुन प्रयत्न भैरहेको छ, त्यसको हामी सबैले डटेर बिरोध गर्नुपर्दछ।… Read More »
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद भैरवचरणसुन्दर श्रेष्ठले सरकार र सिके राउतका बीच भएको ११ बूँदे सहमतिको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सबैमा आग्रह गरे। उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आफ्ना गतिविधि सच्याउन पनि आग्रह गरे। सांसद रामनारायण बिंडारीले उत्कृष्ट संविधान कार्यान्वयनमा आउँदा पनि के कारणले आज सडकमा पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक गाडी गुडेनन् भन्ने प्रश्न… Read More »
कावासोती । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर अगाडिनै बम पड्केपछि प्रहरी चकित परेको छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती फलफुलचोकमा आज बिहान ११ः३० बजे ठूलो अवाजमा बम पड्किदा स्थानीयहरु त्रसित बनेका छन । बम प्रहरी कार्यालय बाट १०० मिटर दुरीमा डिभिजन वन कार्यालय अगाडि पड्केको हो। यसरी प्रहरी कार्यालय नजिकै ठुलो आवाजमा बम पड्किदा सुरक्षामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।… Read More »
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तुलनामा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन कम विवादमा आउँछन् । कुन कार्यक्रममा जानुहुन्छ, कुनमा जान हुँदैन भन्ने भेउ नपाउँदा कहिलेकाहीँ हल्का देखिन्छन् उनी । बाँकी त्यस्तो केही कमजोरी देखिएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीका सन्तान शान्त देखिन्छन् तर उपराष्ट्रपतिका पुत्र दिपेश पुन फरक छन् । ठेक्कापट्टा मिलाउने, प्रहरीको सरुवा बढुवादेखि राज्यका विभिन्न निकायमा उनको सक्रियता बढी देखिन्छन् ।… Read More »
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा १ हजार ५५६ जनाको लागी रोजगारीको अवसर खुलेको छ ।आज सोमबार गोरखापत्रमा एक सूचना प्रकाशन गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव संशाधन शाखाले प्राविधिक समूहमा १ हजार ५५६ जना कर्मचारीको माग गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न पदमा उल्लिखित संख्यामा कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।प्राविधिकतर्फका जवान मात्रै १ हजार चार सय… Read More »